हटाउनुहोस्.बीजी: हेडशट, व्यक्ति, र वस्तुहरू बिना एआई | को साथ छवि पृष्ठभूमि हटाउनुहोस् Martech Zone
यदि तपाईं अनुसरण गर्दै हुनुहुन्न जोएल कम, गर। अब जोएल टेक्नोलोजीको लागि मेरो मनपर्ने स्रोतहरू मध्ये एक हो। ऊ कुटिल, इमानदार, र अविश्वसनीय पारदर्शी छ। त्यहाँ त्यस्तो कुनै दिन छैन जुन मैले पछि खोजेको कुराको लागि जाँच गर्दै थिइनँ… र आज ठूलो कुरा हो!
जोएलले सबैलाई एक नयाँ उपकरण अनलाइनको बारेमा जान्न दिनुहोस्, हटाउनुहोस्.बीजी। उपकरणले व्यक्तिसँग छविहरूको विश्लेषण गर्न कृत्रिम बुद्धिको प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि पृष्ठभूमिलाई सहि र अन्तिम रूपमा हटाउँदछ।
यदि तपाईंले कहिले फोटोशपका साथ गर्न कोशिस गर्नुभयो भने, तपाईंलाई थाहा छ यो कस्तो अफ्रयागत अनुभव हो। फोटोशपको इरेजर विकल्पहरूको बावजुद, र उनीहरूको पनि जादू विकल्पहरू, ती अझै पनी नजिक आउँदैनन्। एक उत्तम फोटोशप प्रयोगकर्ता इर पृष्ठभूमि हेर्नु धेरै अचम्मको छ।
मँ कसरी तपाईलाई ट्यूटोरियल दिदैछु किनकि म आशा गर्दछु कि कहिले, कहिले, कहिले पनि, फेरि त्यो प्रकार्य प्रयोग गर्दैन। यहाँ परिक्षण छ जुन मैले भर्खरै हटाउने अपलोड गरे। म वास्तवमै यसलाई राम्रो टेस्ट दिन चाहान्छु - कुनै करीव अपहरू र पृष्ठभूमि विवरणहरू छैनन्।
व्यक्तिको समूहको फोटोबाट पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
र यहाँ अचम्मको परिणाम छ:
इन्जिनले साइकल हटायो! परिमार्जित तस्बिरले आकार र मार्जिनहरू समायोजित गर्नुहोस् छविलाई ठाडो र तेर्सो बीचमा। केवल आश्चर्यजनक!
हेडशटबाट पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
लोगो वा अन्य वस्तुबाट पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
जबकि हटाउनुहोस्.बीजी मूल रूपमा हेडशटहरू र व्यक्तिहरूबाट पृष्ठभूमि हटाउनको लागि डिजाइन गरिएको थियो, उनीहरूको एल्गोरिदम विकास भएको छ कि तपाईं सेवामा लगभग कुनै पनि छवि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसले पृष्ठभूमिलाई सफासँग हटाउनेछ। मैले यसको लागि धेरै पटक प्रयोग गरें र यो एकदम राम्रो छ!
फोटो पृष्ठभूमि उपकरण र एपीआई हटाउनुहोस्
पृष्ठभूमि हटाउन अनलाइन उपकरण - एकल छवि प्रसंस्करण र ब्याच चलाउन अघि परीक्षणको लागि उत्तम Remove.bg वेबसाइट धेरै जसो आगन्तुकका लागि मार्ग हो। र पूर्वावलोकन छविहरू सँधै निःशुल्क छन्! यहाँ तपाईं सम्पादक पनि फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई पृष्ठभूमि र color वा छवि बदल्न अनुमति दिन्छ।
पृष्ठभूमि हटाउन डेस्कटप उपकरण - विन्डोज, म्याक, वा लिनक्स को लागी हटाउने.बीजी को डेस्कटप संस्करण तपाईंलाई अधिक नियन्त्रण दिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई आउटपुट ढाँचा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याच प्रोसेसिंगका लागि हजारौं र हजारौं छविहरू एक पछि एकको लागि पनि आदर्श हो: आदर्श यदि तपाईं अनलाइन बेच्दै हुनुहुन्छ वा प्रयोगकर्ता-द्वारा उत्पन्न सामग्रीको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ।
पृष्ठभूमि हटाउनको लागि फोटोशप विस्तार - आत्म व्याख्यात्मक! छविहरू प्रोसेसिंग सफ्टवेयर भित्रबाट छविहरू हटाउँनुहोस् भित्र निर्मित उपकरणहरूका साथ वरिपरि फफ बिना। विस्तारमा गरिएको प्रत्येक कटआउट विस्तारित सम्पादनको लागि पूर्ण रूपले सम्पादन योग्य तह मास्कको साथ आउँदछ।
एपीआई छवि पृष्ठभूमि हटाउन को लागी - एपीआई सब भन्दा लचिलो समाधान हो जुन हामी प्रस्ताव गर्छौं। तपाईं विस्तारित सम्पादन एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ लगभग पूर्ण कार्यप्रवाहमा आउटपुट र ब्याच प्रक्रियामा पूरा नियन्त्रण प्राप्त गर्न। र हाम्रो समुदायले पहिले नै फिजमा, WooCommerce, स्केच, र भिजुअल स्टुडियो कोड को लागी तयार-निर्मित प्लगइन्सको एक शानदार दायरा सिर्जना गरेको छ।
मूल्य निर्धारण विकल्पहरूले सदस्यता योजनाहरू समावेश गर्दछ र भुक्तान गर्दा तपाईं जानुहुन्छ।
अब हटाउनुहोस् bb प्रयास गर्नुहोस्!
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु हटाउनुहोस्.बीजी यस लेखमा।
टैग: aiएन्ड्रोइड अनुप्रयोगले छवि पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्APIकृत्रिम बुद्धिDrupalफिमालिनक्सPhotoshopफोटोशप विस्तारपृष्ठभूमि हटाउनुहोस्पृष्ठभूमि एपीआई हटाउनुहोस्हेडशट पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्छवि पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्लोगो पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्व्यक्ति पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्हटाउनुहोस्.बीजीस्केचWindowswoocommerce
एलोकेन्ज: सोशल मीडियामा तपाईंको साइटको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामग्री बुद्धिमानीपूर्वक पोष्ट गर्नुहोस्